Ukuhlaziywa okutsha kwefayile yoyilo lwe-OnePlus 7 | I-Androidsis
I-OnePlus 7 yenye yeefowuni ekulindeleke kakhulu ngaphakathi kuluhlu oluphezulu kwi-Android. Okwangoku asikabi nawo umhla othile wokubonisa kwayo, nangona kufanele ukuba kwenzeke entwasahlobo. Iinkcukacha ezincinci malunga nale fowuni ziza kuthi, Uyilo olufanayo. Ngoku sinokunikezelwa okutsha kwesi siphelo siphezulu, esibonisa iikhamera zazo.
Yonke into ibonisa ukuba i-OnePlus 7 iya kuba nekhamera yokuhambisa engaphambili, Olunye lwefashoni yomzuzu kwi-Android. Ukongeza, ikhamera yangemva kathathu isilindele ngasemva kwayo, into esele ixhaphake kakhulu kwisiphelo se-Android sangoku.
Ezi nguqulelo zintsha zikwabonisa Umdibaniso wemibala eyahlukeneyo eya kuba nayo le OnePlus 7. Uphawu lwesiTshayina luzibophelele kwigradient, eyenziwe nguHuawei kwimfashini kakhulu kunyaka ophelileyo. Sinemibala emithathu, ubuncinci kwezi zinikezelo. Umthunzi ohamba umnyama uye etyheli. Enye kwimibala emnyama ukuya emfusa kunye neyesithathu kwimibala eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngapha kwefowuni bebesele bevuza, njengeekhamera zayo zangasemva eziya kuba yi-48 + 20 + 5 MP. Nangona kule meko ifowuni ayizukubiza ngaphandle kwamacingo, njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kwakhona, ifowuni kulindeleke ukuba ibe neyona processor ilungileyo ye-Snapdragon 855 kwintengiso.
Ibizwa ngokuba yenye yeemodeli ezaziwa kakhulu ngaphakathi kwesiphelo se-Android. Ukongeza, into eqhelekileyo kukuba i-OnePlus 7 izakuba nayo Ixabiso eliphantsi kuninzi lwabakhuphisana nabo. Nangona ukuza kuthi ga ngoku asinalo ixabiso eliqinisekisiweyo eliya kuba nalo modeli eYurophu.
Kungekudala kuya kufuneka sazi ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale OnePlus 7 kwintengiso. Inkampani ngokwayo ayisixeleli kwanto ukuza kuthi ga ngoku malunga nale modeli, okanye malunga nefowuni ene-5G abaza kuyivula kwisiqingatha sesibini walo nyaka, esingenazo iinkcukacha ngoku. Siyathemba ukwazi okungakumbi kwezi veki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukuhanjiswa okutsha kwe-OnePlus 7 kubonisa ikhamera yayo
I-Samsung Galaxy Buds kulula ukuyilungisa